यी ८ अंगमा कोठी भएका व्यक्तिसँग कहिले टिक्दैन पैसा | Makalukhabar.com
यी ८ अंगमा कोठी भएका व्यक्तिसँग कहिले टिक्दैन पैसा
एजेन्सी । शरीरका अलग अलग भागमा आउने कोठीको फरक फरक अर्थ हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शरीरका केही यस्ता भागमा कोठीआएमा पैसा नटिक्ने विश्वास छ । थाहा पाउनुस् शरीरका यी ८ अंगमा कोठी आएमा पैसा नटिक्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
चोर औंलामा कोठी भएका व्यक्तिले आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म पैसा अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
जसले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएनन्, तर, अरुलाई पढाउन एक्लैले एक करोड संकलन गरे
यस्ता स्वभाव भएका व्यक्तीलाई साथी बनाउदैँ नबनाउनु नत्र दुख पाईएला
साउन ६ । मानिस सामाजिक प्राणी हो । आमाको गर्भबाट भूइँमा झरेसँगै ऊ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ । कसैको छोरा छोरी, भाइ बहिनी, नाति नातिनी आदि । जब ठूलो हुँदै जान्छ, अनि रगतसँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरु पनि उसको जीवनमा जोडिन आइपुग्छन्, साथीको रुपमा । साथीको सम्बन्धलाई पवित्र र मनको नाताको रुपमा बुझ्न... जारी राख्नुहोस...
ईच्छा अनुसार यसरी छोरा वा छोरी जन्माउनुस्
साउन ५ । जो पनि चाहन्छन कि सन्तान आफ्नो इच्छा अनुसार होस् । कसैलाई छोराको रहर हुन्छ भने कसैलाई छोरीको । चिनिया बैज्ञानिकहरुका अनुसार छोरा वा छोरीको छनौट आफ्नो इच्छामा भर पर्दछ । तपाईं छोरा चाहनु हुन्छ कि छोरी ? चिनिया बैज्ञानिकहरुले एउटा चार्ट बनाएका छन र यदि तपाईं चार्ट अनुसार गर्नु हुन्छ भने तपाई... जारी राख्नुहोस...
मोटी केटीसँग बिवाह गर्दा यती धेरै फाईदा
श्रवण २ एजेन्सी । विवाह एक सास्वत सत्य हो । विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन नपछुताउने कुरै भएन । यो बीचमा विवाहलाई लिएर अनेक मान्यता रहँदै आएका छन् । सामान्यतया स्लिम केटीहरु आर्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर अहिले एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिका... जारी राख्नुहोस...
वैवाहिक जीवनमा आउने कलहलाई यसरी शान्ति पार्नुहोस्
श्रवण १ । हाजभोलि अधिकांश मानिस दुई प्रकारका वैवाहिक जीवनको समस्याको सामना गरिरहेका छन्। पहिलो हो अशान्त वैवाहिक जीवन र दोस्रो असन्तुष्ट वैवाहिक जीवन । अशान्त वैवाहिक जीवन जुन पति पत्नी एक अर्काको कुरा बुझ्दैनन्, उनीहरुको घरको कुरा आफै दुनियाका सामुन्ने आउने गर्दछ। उनीहरु आफ्नो अशान्त वैवाहिक जीवन... जारी राख्नुहोस...
असार ३१ । ‘लुक एट मि (मलाई हेर्नुहोस्)!” यस्तो सन्देश लेखिएका कपडा लगाउने मानिसले केहीबेरका लागि भए पनि अरूको ध्यान आफूतिर तान्ने गर्दछन्। फ्याशनका पारखीहरू त्यो ध्यानाकर्षण क्षणिक हुने ठान्दछन्। सन्देश लेखिएका टिशर्ट लगाउने प्रचलन फ्याशनका नमुना प्रदर्शन गरिने मञ्चमा मात्र होइन अन्यत्र... जारी राख्नुहोस...
जिवनमा सफल हुनु छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहाेस्
असार ३० । कयौँ पटक हामी अघि बढ्नेका बारेमा सोच्ने गर्दछौँ, तर अघि बढ्न सक्दैनौँ। किनकी हामी परिवर्तनका बारेमा सम्झन पाउँदैनौँ। आज हामी तपाईलाई ७ यस्ता कारणका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसबाट थाहा हुनेछ की अब बारी अघि बढेर सपना पुरा गर्नेको हो, परिवर्तनलाई अप्नाउनेको हो । यस्ता छन् ती कारण १) सबै भन्... जारी राख्नुहोस...
कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै यौनशक्तिवर्द्धक छ ?
असार २९ । यदि कुनै एउटा खास खानेकुराले मानिसको यौनशक्ति वा यौन आनन्द बढाइदिने प्रमाण फेला परेमा त्यो हातहातै विक्री हुन्थ्यो होला। सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन्। तर के कुनै खास खानेकुरा छन् जो प्राकृतिक रूपमै यौनशक्तिवर्द्धक छ ?... जारी राख्नुहोस...
असार २४ । दीर्घकालीन सम्बन्धलाई कायम राख्नका लागि विभिन्न खाले परीक्षणहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ । सधैं एउटै र उस्तै तरिकाले सम्बन्ध कायम रहिरहन सक्दैन । यहाँ दिइएका केही टिप्स अपनाउनुभयो भने तपाईंको साधारण सम्बन्ध पनि अर्को तहमा पुग्न सक्छ । फोरप्ले वा प्राक्क्रीडाका बारेमा त धेरैले लेखेका छन् । तर से... जारी राख्नुहोस...
तपाई लामो जीवन जिउन चाहनुहुन्छ ? यसो भए यसाे गर्नुहोस्
असार २१ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले विश्वभरमा ‘ब्लू जोन’ को विश्लेषण गरेका छन् । जसमा स्वस्थ जीवनशैली तथा आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक विचारका साथ जीवन जिउने मानिसको उमेर लामो हुने तथ्य प्राप्त भएको छ । रिपोर्टहरुका अनुसार ‘ब्लू जोन’का विश्लेषण गर्नेका लागि एक टीम निर्धारण गरिएको थियो... जारी राख्नुहोस...